मलेशिया गृह मन्त्रालयले ३ देशबाट सुरक्षा गार्डको अवसर नेपाललाई के छ ? - jagritikhabar.com
मलेशिया गृह मन्त्रालयले ३ देशबाट सुरक्षा गार्डको अवसर नेपाललाई के छ ?
गृह मन्त्रालय (KDN) ले मलेशिया मा सुरक्षा गार्ड को लागि निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई तीन देशका विदेशीहरूलाई सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्न अनुमति दिने योजना बनाएको छ।
यसका मन्त्री, दातुक सेरी हमजाह जैनुदिनले भने ती देशहरू फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र बंगलादेश हुन् । अब नेपाली बाहेक अब अरु ३ देश का नागरिकले पनि मलेशिया मा सुरक्षा गार्ड मा काम गर्न पाउने।